U-Lorena: Yangoku kwaye eQibileyo eCrosby Kufuphi neeNdlela zeBhayisekile - I-Airbnb
U-Lorena: Yangoku kwaye eQibileyo eCrosby Kufuphi neeNdlela zeBhayisekile
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguCandace
Dibana noLorena - le ndlu isanda kulungiswa kwaye ixhotyiswe kakuhle ikwintliziyo yeCrosby kwisitrato esizolileyo kunye neebhloko ezintathu kude neCuyuna Lakes State Trail ukufikelela ngokukhawuleza kwiCuyuna Mountain Bike Trail System. Siyavuya ukwabelana ngeengcebiso zethu zangaphakathi kunye neendwendwe zethu ukuba zonwabele i-Crosby ngokusemandleni!
Xa uhamba kumnyango wangaphambili, ubuliswa yiveranda ekhuselwe ngaphambili apho unokugcina khona iibhayisekile zakho, iibhodi zokubheqa, iskis, okanye ezinye izixhobo zangaphandle. Siye samisela indawo epholileyo kunye nezitulo zenkampu ukuze iindwendwe zizisebenzise xa ziye epikinikini, zikhenketha, okanye ziqubhe. Yonwabela ikofu kusasa kwiveranda.
Indawo yokuhlala ephambili ineGumbi kunye neBhodi, i-queen size yokutsala isofa yentofontofo ephezulu kunye ne-50" ye-smart TV apho unokufikelela kumxholo wakho wokusasaza. Thatha umkhulisi osuka kwiNkampani yaseCuyuna Brewing kwiSitrato esikhulu kwaye uyonwabele. ibhiya yendawo ngelixa ubukele iNetflix kwisofa ekhululekile. Idesika iyafumaneka, ngoko unokusebenza kunye nokudlala kule ndlu. I-WiFi yasimahla ibandakanyiwe.
Igumbi lokulala linebhedi yokumkanikazi eneTuft kunye neNaliti, umatrasi we-memory foam kunye nekhabhathi enendawo yokuxhoma kunye neeshelufa. Imiqamelo yenkumbulo iphezu kweebhedi. Iimfama zikwiifestile ukuze zikwazi ukulala ngokuzolileyo.
Ikhitshi inezixhobo ezitsha zentsimbi, eziquka ifriji, imicrowave, ioveni, kunye nomenzi wekofu. Zininzi izinto zokupheka ezinokusetyenziswa ziindwendwe ukwenza ukutya okumnandi emva kosuku olumnandi ngaphandle. Ipeninsula ende, enosilarha ivumela indawo eninzi yolungiselelo.
Igumbi lokuhlambela lihlaziywe ngokupheleleyo kunye ne-tub / ishawa combo yokuthatha ibhafu yokuphumla kwiholide yakho.
Ngaphandle sinepropane gas grill ukuba iindwendwe zamkelekile ukuba zisebenzise. Nceda ungasebenzisi ilahle kwi-grill njengoko oku kunokuyonakalisa. Kukho ipatio enetafile yokutyela yangaphandle kunye nomgodi womlilo onezitulo zeAdirondack ngasemva kwendlu.
Iwasha kunye nesomisi ziyafumaneka kwigumbi elingaphantsi ukuze iindwendwe zisebenzise.
Iindwendwe zinokupaka kwiindawo ezimbini zegrabile eziphambi kwendlu. Kukwakho neendawo zokupaka ezininzi esitratweni.
Indlu yethu ibizwa ngokuba yi-Lorena ngembeko yobomi buka-Lorena Hickok owayeyintatheli engakholelekiyo kwaye mhlawumbi ethanda iNenekazi lokuqala u-Eleanor Roosevelt. U-Lorena Hickok wayeyintatheli eMinneapolis Tribune ngexesha lokwakhiwa kwendlu yethu. Siyalihlonipha ilifa lakhe njengentatheli esaphula isilingi yeglasi kwaye siqinisekisa amalungelo abo bonke abahlobo bethu be-LGBTQ ukuba baphile ubomi babo ngokulingana ngokupheleleyo kwaye ngaphandle koloyiko.
4.89 · Izimvo eziyi-84
Ikhaya lethu lisembindini weCrosby. Iindawo zokutyela ezingundoqo zasesitalatweni, imivalo, kunye neevenkile kukukhwela ibhayisekile yemizuzu emi-2 okanye ukuhamba imizuzu eli-10. Ungatsiba kwiCuyuna Lakes State Trail ngaphakathi kwemizuzu.
Iindwendwe ziya kuba neemfihlo kweli khaya kwaye zingene ngekhowudi ekumnyango wangaphambili. Sifowuna, umbhalo, okanye umyalezo kude ukuba uncedo luyafuneka okanye unemibuzo malunga nommandla wendawo.